မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း To be humble | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း To be humble
မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း To be humble
Posted by weiwei on Aug 29, 2011 in My Dear Diary, Think Tank | 26 comments
to be humble wei's diary
၃၈ ဖြာ မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှ နံပါတ် ၂၃ မြောက် မင်္ဂလာတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မလက်ရှိ ကျင်လည်နေရတဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မာန်မာနထောင်လွှားတက်ကြွသူတွေ၊ ရာထူးမာန်၊ ဥစာမာန်၊ ပညာမာန်၊ သားသမီးမာန် စသဖြင့် မာန်မာနအမျိုးမျိုးရှိသူတွေကို မြင်နေတွေ့နေရတာများနေပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိရတဲ့ အွန်လိုင်းလိုနေရာမှာတောင်မှ မာန်မာနတွေတလူလူတက်နေကြတာကို မြင်မိတော့ ဘေးကနေ သံဝေဂယူမိတဲ့အချိန်တိုလေးမှာပဲ ဒီပို့စ်ကို အမြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလူမျိုးတွေက မာန်မာနထောင်လွှားလေ့ရှိပြီး ဘယ်လိုလူမျိုးတွေက နှိမ့်ချစိတ်ရှိသလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်မိတယ်။ မပြည့်တဲ့အိုး ဘောင်ဘင်ခတ် ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးက သိပ်မှန်ပါလားလို့ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းရဲ့အစ်ကိုတစ်ယောက်က အလွန်ချမ်းသာသော သူဌေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အပြင်မှာ ဒီအတိုင်းတွေ့ရင် ချမ်းသာတယ်လို့ ထင်စရာအကြောင်းမရှိလောက်အောင် ရိုးရိုးသားသားနဲ့ နှိမ့်ချလေ့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းဘေးမှာ ဈေးရောင်းရတဲ့ဘ၀ကနေ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူ့အရည်အချင်းတစ်ခုထဲမှာ ရိုးသားကြိုးစားမှုနှင့် နှိမ့်ချဆက်ဆံတတ်ခြင်းက အဓိကဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ တစ်ရပ်ကွက်ထဲနေသူတွေ တစ်မြို့ထဲနေသူတွေရဲ့ အခက်အခဲကို အချိန်မရွေးဖြေရှင်းပေးတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းကောင်းမှုကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါများပါတယ်။
သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် မာန်မာန တလူလူနဲ့နေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ မာန်မာနရှိသူတွေကို သေချာကြည့်ရင် သူတို့တကယ်ကျိကျိတက် မချမ်းသာပါဘူး။ ဟန်ဆောင်မှုက ပိုများပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ မရှိသေးတာကို ရှိလာတဲ့အခါ အောက်ခြေလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဘ၀င်မြင့် လာသူတွေဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ ကိုယ်တိုင်သိမှာ မဟုတ်ပေမယ့် ဘေးလူက မြင်နေရပါတယ်။ ပြောပြန်ရင်လဲ မနာလိုဖြစ်တယ်ထင်မှာမို့ ကွယ်ရာမှာသာ အတင်းပြောခံရလေ့ရှိတဲ့ လူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ရာထူးနဲ့ပါတ်သက်နဲ့မာနတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဂုဏ်ပကာသနတွေပါပဲ။ ကျွန်မတို့အလုပ်မှာ MD က ရာထူးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူမာန်တက်မယ်ဆိုရင် အများကြီးတက်လို့ရလောက်တဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မာန်မာနလုံးဝမရှိတဲ့ နှိမ့်ချတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လူ့သက်တမ်းတိုတိုလေးမှာ ခဏတာတာဝန်ယူရတဲ့ ရာထူးဂုဏ်ထူးတွေကို သူမမက်ဘူးလို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဂိတ်စောင့်ကိုတောင် တလေးတစားဆက်ဆံနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ အလုပ်လုပ်ရာမှာ အလွန်အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီး လူချစ်လူခင်များပါတယ်။ ကျွန်မတို့လို ပညာနဲ့ ဥာဏလုပ်အားလုပ်ပေးနေရသူတွေကို လေးလေးစားစားဆက်ဆံပါတယ်။ သူမသိတာကို မသိဘူးလို့ ၀န်ခံပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ လူငယ်တွေဆီက အကြံဥာဏ်ကို တလေးတစားနဲ့တောင်းခံလေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မသိရသလောက် တခြားသော ရာထူး ဂုဏ်ထူးရှိသူတွေက ကျွန်မတို့ MD လိုလူမျိုးမဟုတ်ကြဘူး။ မာန်မာနတက်နေကြပြီး တစ်သွေး တစ်သံ တစ်မိန့် စနစ်ကို နှစ်သက်ကြသူများပါတယ်။ ပညာတတ်တွေကိုလဲ သူ့လက်အောက်မှာ လုပ်နေသူတွေလို့သဘောထားပြီး အခန့်မသင့်တိုင်း ဆူပူကြိမ်းမောင်းလေ့ရှိကြတယ်။ အကောင်းနဲ့ပေးလာတဲ့အကြံအစည်များကိုလဲ အထင်သေးစိတ်နဲ့ လက်ခံလေ့မရှိကြပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများတွေရဲ့အမုန်းကို ခံရတာပေါ့။ ဘယ်သူမုန်းမုန်း ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားတာဖြစ်ပေမယ့် ချစ်ခြင်းနဲ့ မုန်းခြင်းမှာ ချစ်ခြင်းက ပိုကောင်းတာသေချာပါတယ်။ ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ဆိုတာ ရေပွက်ပမာခဏတာသာဖြစ်တာမို့ ရည်ရှည်ကိုမြင်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ရာဇ၀င်ထဲမှာ သာဓကအနေနဲ့ သောမလုလင်ရဲ့ နှိမ့်ချခြင်းအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းပြန်ရေးနေရင် ရှည်နေမှာမို့ ဒီပို့စ်ထဲမှာ မရေးတော့ပါဘူး။
ထင်ရှားတဲ့ဥပမာနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ လူတိုင်းလူတိုင်း သူ့အထွာနဲ့သူ မာန်မာနရှိနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ကသင်ဖူးတဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခုကို သတိရမိတယ်။ ၀င်းမှည့်နေတဲ့ စပါးနှံက ကိုင်းညွှတ်နေတတ်တဲ့ ဥပမာလေးတစ်ခုပါ။ မူလတန်းဖတ်စာထဲမှာ သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ စပါးနှံသင်ခန်းစာလေးကလဲ နှိမ့်ချတတ်အောင် ပညာပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆင်ခြင်ပြီး မာန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ မပြည့်သေးလို့ဟုသာ မှတ်လိုက်ပါ။ မညွှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း မမှည့်သေးလို့သာမှတ်လိုက်ပါ။
လူတွေထဲမှာ အခက်ဆုံးလူကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘယ်လောက်သိတယ် တတ်တယ်ဆိုတာကို တကယ်မသိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အတတ်ပညာ နဲနဲလေးပဲ သိထားတာကို လောကမှာ ငါသိတာအကုန်ပဲလို့ ထင်နေရင်တော့ သွားပြီ။ အဲဒီလိုမာန်မာနရှိသူတွေကို ဘယ်သူမှ ကယ်လို့မရနိုင်ဘူး။ နောက်တစ်မျိုးက ပညာအရည်အချင်းဘွဲ့လက်မှတ် အကြီးကြီးတွေရပြီး ငါ့လောက်တော်တဲ့သူ မရှိဘူးလို့ထင်နေတတ်တဲ့သူတွေ။ သူတို့ယူလိုက်တဲ့ဘွဲ့က အမြင့်ဆုံးဆိုတော့ ငါ့လောက်တတ်တဲ့သူ မရှိဘူးလို့ စိတ်ကြီးဝင်သွားတဲ့သူတွေ။ ဘယ်သူ့အဆုံးအမမှ နားမ၀င်နိုင်လောက်အောင် မာန်တက်နေတော့ ဘယ်လိုမှ မနှိမ့်ချနိုင်ကြဘူး။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ပြည့်နေလို့ အခုလိုရေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူလိုကိုယ်လို မပြည့်သေးသူတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ သတိထားဆင်ခြင်စိတ်ဝင်တုန်းလေး ရေးလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတိပေးရင်းနဲ့ ရွာထဲကလူတွေကိုလည်း မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီ နေထိုင်ခြင်းဖြင့် မင်္ဂလာရှိသော နေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း ……..
နိဝါတောစ ဧတံမင်္ဂလ မုတ္တမံ
မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်းသည် မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏ …
မပြည့်တဲ့ အိုး ဘောင်ဘင် ခတ်တာ တော်တော် မှန်တယ်။
အရင်တုန်းက မသိသာဘူး။ အခု နောက်ပိုင်း သိပ်သိသာတယ်။
မိတ်ဆွေ တယောက်က ပြောဖူးတယ်။ နားမလည်ရင် မကောင်းမှန်း မသိဘူးတဲ့.. များများ သိလေ များများ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလေတဲ့.. ကြားခါစ တုန်းက သိပ်မသိဘူး။ အသက် ၁၆ နှစ်လောက်ဆိုတော့ ဘာမဆို အကုန် ပျော်စရာ ကောင်းနေတော့ စိတ်ပျက်စရာ ဆိုတာ မသိဘူး။ တဖြည်းဖြည်း လူအကြောင်း သိလာမှပဲ.. အဲဒီ စကား နားလည်တော့တယ်။
အင်း..ခက်ကရောပဲ။ “ဘ၀ကိုကောင်းကြိုးမပေးသော လူ.မာနတဲ.” ။ ထားလိုက်ပါ အရှိန်ကုန်သွား၇င်တော. CNG ရော ၊ Diesel ရောကုန်သွားမှာပါ။ မဝေ .. ဆ၇ာမေ၇းတာ ကျူပ်ခံစားမိတယ်။ ဘာပြောချင်လဲ ကျူပ်သိတယ်..။နားလည်တယ်
““နိဝါတောစ ဧတံမင်္ဂလ မုတ္တမံမိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်းသည် မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏ …”” မိမိကိုယ်မိမိနှိမ့်ချနိုင်သမျှနှိမ့်ချခြင်းသည်နောင်အခါကြီးမြင့်ဖို့ရာဖြစ်သည်တဲ့။
အင်း.. မင်္ဂလသုတ်ညွှန်းပြထားတော့.. ဘုရားစာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မပေါ့..။(ပါဌိကနေ..မြန်မာပြန်တာမှာ လိုရာဆွဲရေးထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ)
ဒါပေမဲ့.. လောကီရေးစစ်စစ်မှာ.. “မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်းသည် တပါးသူတို့အား.. ခေါင်းပေါ်တက်လာစေရန် အခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်” လို့..လူတွေကယူဆကြတော့တာပါပဲ..။
ဥပမာ..အပေါ်က လုံမ မီးမီးသော် မန်းတာလေးပဲကြည့်..
အခုနှိမ်ချနေတာ..နောင်အခါ ကြီးမြင့်ပိုသာစေဖို့ လုပ်နေတာ ဖြစ်တော့တာပဲ..။ (ဥပမာနော..ဥပမာ..)
ယူအက်စ်မှာ အနေကြာတာနဲ့အမျှ ထင်ထင်ရှားရှားသတိပြုမိတာတခုရှိတယ်..။
ဒါကလည်း.. အမေရိကားကို..ကမ္ဘာအလယ် အမြှင့်ဆုံးဆွဲတင်သွားစေတဲ့. အရေးအကြီးဆုံး စိတ်ဓါတ်ရေးရာ အညွှန်းတခုလို့..ယူဆမိတယ်..။
အောက်က စာလေးပါပဲ.။ “ဘုရားသခင်သည် လူသားတိုင်းကို တန်းတူညီမျှ ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။”
The quotation “All men are created equal” has been called an “immortal declaration”, and “perhaps” the single phrase of the United States Revolutionary period with the greatest “continuing importance”. Thomas Jefferson first used the phrase in the Declaration of Independence asarebuttal to the going political theory of the day: the Divine Right of Kings. It was thereafter quoted or incorporated into speeches byawide array of substantial figures in American political and social life in the United States. The final form of the phrase was sylized by Benjamin Franklin.
အဲဒီကနေ.. ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း အနှစ်ကို သွားကြည်.. ဒီလိုတွေ့ရမယ်..
Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789), article 1: “Men are born and remain free and equal in rights. Social distinctions may be founded only upon the general good.”
The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (French: Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen) isafundamental document of the French Revolution, defining the individual and collective rights of all the estates of the realm as universal. Influenced by the doctrine of natural right, the rights of man are universal: valid at all times and in every place, pertaining to human nature itself. Although it establishes fundamental rights for French citizens and “all the members of the social Body”, it addresses neither the status of women nor slavery; despite that, it isaprecursor document to international human rights instruments.
“လူသားတိုင်း.. တန်းတူညီမျှ အပြန်အလှန် လေးစားသမှုနဲ့ ဆက်ဆံကြ” ဆိုတာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မိတယ်..။
အရေးအကြီးဆုံး စိတ်ဓါတ်ရေးရာ အညွှန်းတခု = ” All men are created equal ”
This is the main cause, why the best peoples all over the world, want to migrate & live in USA.
Without strictly following this standard,
No country can never ever compete USA.
Handy note says:
ဘုရားပြီးရင်… ပညာအရာမှာအတတ်ဆုံး ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီး ဟာ…. ယနေ့ မှ”စ”၀တ်တဲ့ကို ရင်လေး ရဲ့ အဆုံးအမစကား ကိုတောင် တလေးတစား နားထောင်ပါတယ်တဲ့။
“မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်းသည် တပါးသူတို့အား.. ခေါင်းပေါ်တက်လာစေရန် အခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်”
ကျွန်တော်ကတော့ သဂျီးလို မတူတဲ့ အတွေး နဲ့ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော် ဒီ နှိမ့်ချခြင်းအပေါ် တွေးမြင်တာကိုကမတူတာပါ။
ဒီလိုဗျာ weiwei သူငယ်ချင်းအစ်ကို နဲ့MD ကိုပဲ တည်ပြောမယ်။ သူတို့ တတွေက နှိမ့်ချတာ လို့ ကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ သူတို့ တတွေက မပလွှား၊မမောက်မာတာ တစ်ဖက်သားကို လေးစားတန်ဖိုးထားတာလို့ မြင်တယ်။ နှိမ့်ချတယ် ဆိုတာ (ကျွန်တော်ဖတ်မိ၊မှတ်သားမိသလောက်) ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရည်အချင်း၊စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တကယ်ရှိတာထက်ကို ပိုမို နည်းပါးစွာ ပြုမူ၊ပြောဆို၊ရေးသားခြင်းပဲ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ဒီလူ အနှေးနဲ့ အမြန်၊ အနည်းနဲ့ အများ သူများတကာရဲ့ ဝေဖန်၊ပုတ်ခတ်၊ အထင်သေး၊ စော်ကားမှုကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ မယုံရင် လုပ်ကြည့်ကြပါ၊ ပြီးတော့ကာမှ ကိုယ့်ကိုစော်ကားသူကို ဒေါသအမျက်ခြောင်းခြောင်းထွက်မနေပါနဲ့ ။ ဒီနေရာမှ တစ်ခုပြောစရာရှိတာက ကိုယ့်အကြောင်း ကိုအနီးကပ်သိထားတဲ့သူနဲ့ ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စတန့် ထွင်တယ်လို့ချီးကျူးထောပနာပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒီ့အတိုင်းနေရင်တောင်မှ ဘလိုင်းကြီး တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေ ရှိနေတာ။ ကဲ ဒီရွာထဲကလူတွေ ကိုယ်ယူမယ့် ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ မိဘတွေ ခေါ်တွေ့ လို့စကားစမြည်ပြောကျရင် ကျွန်တော်၊ကျွန်မက ၁၀ တန်းမအောင်သေးပါဘူး၊ အလုပ်လည်း မယ်မယ်ရရမရှိသေးပါဘူး၊ မိဘတွေကလည်း အိမ်ဖော်တွေပါလို့ ဖြေကြည့်ကြည့်ပါလား။ဟဲ ဟဲ ဟဲ။
အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်အရှိအတိုင်း မတ်ခ်တူး ရွှေငါးလောက်ကို စီးသွားမယ်၊ လုပ်ငန်းရှင်မိဘနှစ်ပါး ကိုဖုန်းကြိုဆက်ခိုင်းထားမယ်၊ ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ပညာအရည်အချင်းကို ချစ်သူကိုကြိုပြောခိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ရော။ ဟား ဟား ဟား တွေ့ ပြီပေါ့ဗျာ ဂျီမနဲ့ ပဲခင်းနဲ့ ။
တစ်ခါတလေကျတော့လည်း ကိုယ့်ကိုထိခိုက်လာမယ့် အရာကိုကြိုတွေးမိရင်(ကြိုတင်တွက်ဆမိရင်) ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ဦးစွာထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြင့် ဒီလိုထိခိုက်မှုမျိုးမဖြစ်လာအောင် ဟန့် တားနိုင်ပါသေးတယ်။
အိုကေနော် ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချခြင်းသည် မကောင်းဟု ပြောဆိုနေတာ (လုံးဝ) မဟုတ်ကြောင်းပါ။ ဒါပေမယ်လို့ဒီနေ့ ခေတ်အချိန်အခါမှာ ဒီဟာကို သုံးခြင်းဖြင့် မကောင်းဟုပြောဆိုနေတာပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထောင်လွှား၊ကြွားဝါ၊မောက်မာ မနေဘဲ အရှိအရှိအတိုင်း ၊ လူအများကိုလည်း လေးစားသမှု နဲ့ ဆက်ဆံဖို့ ပါဘဲ။
(လူတွေထဲမှာ အခက်ဆုံးလူကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘယ်လောက်သိတယ် တတ်တယ်ဆိုတာကို တကယ်မသိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ )
အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကွန့် မန်ပေးရင် ကျွန့် တော့်အမြင်လို့ အမြဲပဲထည့်ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်တတ်သိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေနိုင် (ရှိနေ)လို့ ပါ ။ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်အမြင်ကို ၀င်သာရေးနေရတာ တစ်ယောက်ယောက်က (အခက်ဆုံးလူလိုပေါ့) ကိုယ့်ကိုဝင်တွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှ ငြိမ်မခံနိုင်ပါဘူး။ စိတ်ဓါတ်မရင့်ကျက်သေးဘူးပဲပြောပြော။ အကျိုးအကြောင်းမရှင်းပြဘဲ ဘလိုင်းကြီး ၀င်တီးရင်တော့ အမောက်ကလေးထောင်ပြလိုက်ပါမယ် နဂါးမှန်းသိအောင်ပေါ့ ၊နို့ မို့ ဆို
ကိုယ်ကိုယ်ကိုမာန်မာန မပလွှားဘဲ၊ အထက်လူ၊အောက်လူ၊ ဘေးလူတွေပါမကျန် တလေးတစားဆက်ဆံတာ ကပြောရလွယ်ပေမဲ့၊ တကယ်လက်တွေ့မှာအလွန်ခက်ပြန်ရော။ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေကိုး။ ကာလံဒေသံလိုက်ပြီးဆက်ဆံကြရတာ၊ လူ့လောကမှာရှိနေတဲ့ ဓမ္မတာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ လူ့အောက်ကြို့လို့ လူပိမသေပါဘူးဗျာလို့ပြောနေကြသူတွေ ပြောရင်းပြောရင်း ဒေါတင်းထကြတာ မနဲဘဲကိုးဗျာနော…။
နှိမ့်ချတာလည်းမဟုတ် ၊ ပလွှားတာလည်းမဟုတ် ၊ သည်းခံသင့်တာသည်းခံပြီး ကိုယ်ချင်းစာတရားလက်ကိုင်ထားပြီး ဆက်ဆံကြတာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ ကျမတို့မြန်မာတွေက နှိမ့်ချတတ်တော့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်ရှင်အချို့ ပိုပြီး အထက်စီးဆန်လာတာ ကြုံဖူးလို့ပါ။ တခါတလေ အစွယ်လေးပြမှ ပြန်လျှောချတာလည်းတွေ့ဖူးပါတယ်။ သူ့နေရာနဲ့သူ အလိုက်အထိုက် ပေါ့နော။
We encountered more arrogant & haughty (မောက်မာ) people after 1988 uprising.
The richness (ချမ်းသာမှု) generally comes from combination of ရိုးသားမှု, ကြိုးစားမှု, ပညာ နှင့် နှိမ့်ချဆက်ဆံမှု.
But, after 1988,
The richness (ချမ်းသာမှု) mainly comes from power အာဏာ only & ပညာတတ် were oppressed.
Our people witness those example everyday &
Day by day, our people become rude & haughty (မောက်မာ).
“ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း ကိုယ့်ကိုထိခိုက်လာမယ့် အရာကိုကြိုတွေးမိရင် ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ဦးစွာထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြင့် ဒီလိုထိခိုက်မှုမျိုးမဖြစ်လာအောင် ဟန့် တားနိုင်ပါသေးတယ် ”
It is correct & reality. Especially, you need it recently in Myanmar.
Finally, In my opinion,
Even though you were boasting (ကြွားဝါ), but,
if you said the truth, then, it is acceptable.
လေးလေး စားစား ဆက်ဆံ ရင် လုံလောက် ပါတယ် နေရာ တိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုနှိမ့်ချ နေစရာ မလိုဘူး လို့ထင်ပါတယ် ။ လူအားလုံး အကောင်းအဆိုးရှိသလို ၊ လူတိုင်းမှာ မတူတဲ့ အရည်အချင်း ရှိပါတယ် ။ ကိုယ်မသိတာ သူသိ ပေမဲ့ ကိုယ်သိ တာသူမသိတာ ရှိနိုင်ပါတယ် ။ ကိုယ့်မှာ ပစ္စည်းဥစ္စာ မရှိပေမဲ့ ပညာဉဏ်မှာ သာနိုင်ပါတယ် ။ အားလုံးကို အထင်လည်း မသေး အထင်လည်း မကြီးတာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင် ပါတယ် ။ စိတ်ဓာတ် အရလည်းပို ကြန့်ခိုင်စေတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ MD က ကိုယ့်ကိုယ် ကိုနှိမ့်ချ တယ်ဆိုတာ က သူ့ လုပ်ငန်း အောင်မြင် ဖို့ နည်းလမ်း တခု သုံးနေတာလို့ မြင်ပါတယ် ။ိုနှိမ့်ချ နေတာမဟုတ်လောက်ပါဘူး ထင်ပါတယ် ။
MD က နှိမ့်ချတယ်ဆိုတာ လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေကို လေးလေးစားစားဆက်ဆံတာကို ဆိုလိုတာပါ …. လမ်းမှာတွေ့ရင် ရယ်ရယ်မောမော ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဆက်ဆံပါတယ် … အခက်အခဲရှိလို့ အကူအညီတောင်းရင်လည်း ဖြေရှင်းပေးပါတယ် … မာန်မာနမထောင်လွှားတတ်လို့ အလုပ်လုပ်ရတာ မင်္ဂလာရှိပြီး လူပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါးရှိတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်နေနိုင်တယ် …
humble ကို စိတ်ကြီးမဝင်တာလို့လည်း မြင်နိုင်ပါတယ်။ သဂျီးနဲ့ ကွဲပြားစွာမြင်ကြည့်တာပါ။ ရေတဝက်ပြည့်နေတဲ့ ဖန်ခွက်ကို ကြည့်သလို့ ကြည့်သူရှုထောင့်ကနေ အမြင်အမျိုးမျိုးကွဲနိုင်ပါတယ်။ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီးမွန်း မြန်မာပြည် နာဂစ်အလွန်မြင်ကွင်းကို ကြည့်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထင်တယ်ပြောတာ I felt humble ဆိုလား အဲသလို ငါတော့တရားရတယ်လို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အောင်မြင်မှုရတဲ့အခါ ဥပမာ ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ရင် ရှုံးနိမ့်သူများကို နှစ်သိမ့်မှု ကတိကဝတ်ပြခြင်း လည်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကြီးမဝင်တဲ့သဘောနဲ့ဆို ဘယ်နေရာမဆို သုံးလို့ နစ်နာရန် မရှိသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် မမဝေ။ ဘွားဘွားက ဆုံးမခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းကတော့ ခုချိန်တိုင် နားထဲမှာ စွဲထင်နေမြဲပါပဲ။ ဘာလဲဆိုတော့ မြေးတဲ့ လူအောက်ကျို့လို့ လူပိလို့မသေဘူးတဲ့… ဒီစကားတစ်ခွန်းဟာ ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ အမြဲဆင်ခြင်သုံးသပ်စရာတွေကြီးပါပဲ။
Dear Ma Naw Phyu Lay,
May I advice you one thing….
” လူပိလို့  / လူပိရင် သေ ပါတယ် ”
You should pay your respect (လေးစား) to the people,
but, it must be appropriate/proportionate to their character & knowledge.
(eg, No character, then, no respect )
I will not နှိမ့်ချ myself,
because, sometimes, it also pulls down your spirit/ambition (စိတ်ဓါတ်).
be smart (intelligent), be hardworking & be the best,
then, You don’t need to care about other people & surrounding (ပတ်ဝန်းကျင်).
In fact, other people & surrounding (ပတ်ဝန်းကျင်) will really care to you.
When I said about logical reasoning/thinking,
I will never ever consider/care of/mess up with ဘာသာရေး & personal
( what ဘုရား/God/Allah/my father/my teacher/my boss said ) :p
ဘာမှမရှိတဲ့အိုးက အသံအကျယ်ဆုံးမြည်တယ် တဲ့
ရိုသေလေးစားထိုက်သူကို ရိုသေလေးစားပီးတော့ ပုံမှန်နေထိုင်တာပဲကောင်းပဲ
အဲ့လိုပုံမှန်နေထိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ အသက်အရွယ်ချင်းမတူ၊ နေရာဒေသချင်းမတူ၊ လူမျိုးဘာသာချင်းမတူရင် ပုံမှန်ဆိုတာလဲ မတူတော့ပြန်ဘူး
ဗမာစာအသုံးအနှုံးကလဲ သုံးရတော်တော်ခက်ပါတယ် … နှိမ့်ချတယ်ဆိုတာ မာနမထောင်လွှားတာကို ဆိုလိုတာပါ … မောက်မာတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ …
လူတိုင်းကို လေးလေးစားစားဆက်ဆံနိုင်တာလဲ နှိမ့်ချခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ …
မာန်တက်နေသူတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အထင်ကြီးနေသူတွေက သူများတွေကို လေးလေးစားစားမဆက်ဆံတတ်ကြဘူး …
ဘုရားဟော မင်္ဂလသုတ်တော်မှာ ဂါရဝေါစ နဲ့ နိဝါတောစ နှစ်မျိုးပါပါတယ် …
ရိုသေတတ်တာ မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်သလို နှိမ့်ချတတ်တာလဲ မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ် …
မန် မာနမထောင်လွှားသူအတွက်ကတော့ အမြဲစိတ်အေးချမ်းသာမူကို ရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ပြိုင်ရာရင်အရူံးပေးနှလုံးအေးတဲ့ ဆေး။(တရးသဘော အရနော် နိုင်ငံရေးနဲ့မရောစေချင်ဘူး၊အရာရာတိုင်းကိုလည်း အမေရိကားက ပေတံနဲ့မတိုင်းစေလိုဘူး၊)မဝေရေးတဲ့ပိုစ့်ရဲ့ဆိုလိုရင်းအနှစ်ကို သဘောပေါက်တယ် နားလည်တယ် လက်ခံတယ်။
မင်္ဂလာတရားကို ဘယ်နေရမှာဖြစ်ဖြစ်လက်တွေအသုံးပြုကြည်လို့ရပါတယ်။ဥပမာ။ ။စားပွဲထိုးတစ်ဦးကို သောက်ရေတစ်ခွက်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတာကို ပြောဆိုခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတဲ့စကားလုံးတွေက ထိုသူရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။
May I have glass of water,Please…(OR) Bring for meaglass of water.!!
ဘ၀င်မြင့်လွန်းသူဟာ နိမ့်ကျချိန်ရောက်ပီဆိုရင်တော့ ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ ခံစားမူမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။
အောကခြေ်မှစပြီး လူအများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်သူကတော့ နိမ့်ကျချိန်ရောက်ခဲ့ရင်တောင် အပေါ်ကိုဆွဲတင်ပေးမယ့်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမှာလွဲပါ။
ကြီးသူကိုရိုသေ၊ရွယ်တူ ငယ်သူကိုလေးစား မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ။(ဘယ်ဘာသာ မဆို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြုမူနေထိုင်ဖို့ သွန်သင်ဆုံးမ လမ်းပြထားတာမရှိပါဘူး၊ရှိပါတယ်ဆိုရင်လည်း အထောက်အထားနဲ့တကွ ဘာသာအမည်တွေကိုဖေါ်ပြပေးစေချင်ပါတယ်)။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း၊ လက်အောက်ငယ်သား၊ ကိုယ့်အထက်အရာရှိ၊ ကိုယ့် လုပ်ငန်းရှင်၊ ကိုယ့်ဝန်ထမ်း အစရှိသဖြင့် ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ ကိုယ့်ထက် နိမ့်သူရော၊ မြင့်သူကိုပါ စိတ်ရင်းစေတနာအမှန်အတိုင်း (စိတ်ရင်းအတိုင်း) ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း လို့ဆိုတဲ့ (တရားတော်လာ-ဥဇူစ) ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အသုံးချ၍ ကိစ္စအများအပြားကို အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဝေေ၀ပြောတဲ့ နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာ မာန်မာနမထောင်လွှားတာ၊ ယဉ်ကျေးပြူငှာစွာ ဆက်ဆံတာ၊ တနည်းအားဖြင့်-
အဲလို ဆိုလိုတာလို့ သဘောပေါက်ပြီး အားပေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရာထူးအာဏာ ငွေကြေးဂုဏ် မမောက်ပဲ မှန်ကန်သောသစ္စာ စကားဖြင့် ချိုသာစွာ ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။
နိမ့်ချခြင်း ဆိုတာ သိပ်လေးနက်သွားလို့ ၀န်ပိတာ သက်သာသွားအောင် တဦးပေါ် တစ်ဦး လေးလေးစားစား ဆက်ဆံ စေချင်တယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ပြောင်းစေချင်ကြတာလား မသိဘူး။
ဂျပန် ဘုရင်တောင် သူ့ပြည်သူ လူထု ကို ခါးကို ကုန်းနေအောင် အလေးပြုနေသေးတာပဲ..
အားလုံးက သူ့ အထွာ နဲ့ သူ ရှိတယ်လို့ ယူဆတယ်။
သိမ်မွေ့တာနဲ့ ရိုင်းစိုင်းတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သလို
လေးစားတာနဲ့ မောက်မာတာ တခြားစီပါပဲ။
ဆန့်ကျင်ဘက်ခြင်း တူညီစွာ ပေါင်းစည်းတတ်ကြတယ်။
မောက်မာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ လူ နဲ့
လူအချင်းချင်း အပေါ် လေးစားမှုနဲ့ သိမ့်မွေ့မှု ရှိရှိ ဆက်ဆံ တဲ့လူ
ကိုယ် တော်ကြောင်း တတ်ကြောင်း လူတိုင်းကို လိုက်ကြွားစရာ မလိုပါဘူး။
ပတ်ဝန်းကျင်က ကောင်းရင် ကောင်းသလို မကောင်းရင် မကောင်းသလို အသံတွေ ပဲ့တင် ထပ်တတ်ပါတယ်။
ကြွားဖို့ အရှိန်အ၀ါ ထုတ်ပြဖို့ လိုတဲ့ အခါ အနည်းအကျဉ်းသာ ထုတ်ပြမယ်ဆိုရင်လည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ထုတ်ပြဖို့ လိုမယ် ထင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ အရှိန်အ၀ါ နဲ့ ကြွားဝါနေမယ် ဆိုရင်တော့ ချစ်ပြီး ရိုသေတာ မဟုတ်တော့ဘူး ကြောက်ပြီး ရိုသေတာ.. ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အပါအ၀င် အားလုံးကို ဖြူဖြူစင်စင် နဲ့ လောကကြီးမှာ အသက်ရှင်စေချင်တယ်။
(တစ်ခါတလေကျတော့လည်း ကိုယ့်ကိုထိခိုက်လာမယ့် အရာကိုကြိုတွေးမိရင် ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ဦးစွာထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြင့် ဒီလိုထိခိုက်မှုမျိုးမဖြစ်လာအောင် ဟန့် တားနိုင်ပါသေးတယ် )
(နှိမ့်ချတာလည်းမဟုတ် ၊ ပလွှားတာလည်းမဟုတ် ၊ သည်းခံသင့်တာသည်းခံပြီး ကိုယ်ချင်းစာတရားလက်ကိုင်ထားပြီး ဆက်ဆံကြတာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ ကျမတို့မြန်မာတွေက နှိမ့်ချတတ်တော့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်ရှင်အချို့ ပိုပြီး အထက်စီးဆန်လာတာ ကြုံဖူးလို့ပါ။ တခါတလေ အစွယ်လေးပြမှ ပြန်လျှောချတာလည်းတွေ့ဖူးပါတယ်။ သူ့နေရာနဲ့သူ အလိုက်အထိုက် ပေါ့နော။)
အထက်ကစာပိုဒ်လေးတွေ ထဲက ကိုယ်ကြုံဘူးတာလဲရှိတယ် မှန်တာလဲရှိတယ် ဒါကြောင့်ပြန်ကိုးကားလိုက် ပါတယ် ။
(မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်းသည် တပါးသူတို့အား.. ခေါင်းပေါ်တက်လာစေရန် အခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်)
အဲဒီလို အမြင်မျိုးနဲ့လည်း အမြဲနေခဲ့တယ် လူတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာတော့ ဒါဟာ အမြဲမမှန်ပါလား ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သိခဲ့ရတဲ့နေ့ ရောက်ရှိခဲ့တယ်၊
ကျွန်တော် နေတဲ့မြို့မှာ တော်တော် ချမ်းသာတဲ့ Eric Lidster လို့ ခေါ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ် ။
မြို့ပေါ်မှာတင် အိမ် အလုံး(၇၀) ကျော် လောက် ပိုင်ဆိုင် ငှားရမ်း ထားပြီး လန်ဒန်နဲ. အခြားမြို့တွေ မှာ အများကြီးလည်း ရှိပါသေးတယ် ။ ကျွန်တော့် အလုပ်ရှင်ရဲ့ သိပ်မရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေပါ။
တီရှပ် ဘောင်းဘီအတို နဲ့ ဖြစိသလို နေတတ်ပေမယ့် ငါ့မှာ ငွေနဲ့ ဂုဏ်ရှိတယ် အ၀တ်အစား မလိုဘူးဆိုတဲ့ မောက်မာတတ်တဲ့ လုစားမျိုးထဲမှာပါ ပါတယ်၊
တစ်နေ့ ကျွန်တော်အလုပ် လုပ်နေတဲ့ဆိုင်ကို ရောက်လာပါတယ် ဘာမှ မပြောရသေးခင် မှာပဲ သူဘောင်းဘီတိုနဲ့မို့လို့ ပေးမ၀င်ရင် တခြားဆိုင်တွေ အများကြီးရှိကြောင်း၊သူနဲ့ပါလာတဲ့ ကျန်လုတွေ ကိုလည်း ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်က သူ့ကိုကောင်းကောင်း သိကြောင်း ခပ်တင်းတင်း ခပ်မာမာ ပဲ ပြောပါတယ်။ rules and regulations အရ ပေးမ၀င်ရင် ရပေမယ့် လက်ခံပြီး စားသောက်စေပါတယ်။
နိုက်အော့ဖ် ရလို့ အိမ်ပြန်ခါနီး ကုတ်တွေ ကြောင်ရှာသီးတွေ ချွတ်ထား တဲ့အချိန်၊ ကလေးတွေ လည်း ထမင်းစားနေကြတဲ့ အချိန် ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင် ဆာဗ့် လုပ်နေတဲ့ ဘဆွေကို လည်း တင်တင်စီးစီး ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပဲဆက်ဆံပါတယ်။စိတ်ကောင်းဝင်နေတဲ့ ဘဆွေ
မိမိရဲ့ customer ကို ရိုကျိူး ပျူ ငှာစွာနဲ့ တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ် လေသံတောင် မမာ မိအောင် မိမိကိုယ် မိမိ နှိမ့်ချ ပြောဆိုဆက်ဆံလိုက်ပါတယ်။(လူတိုင်းကို လေးလေးစားစားဆက်ဆံနိုင်တာလဲ နှိမ့်ချခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ )။
ဘာစိတ်ဝင်နေမှန်းမသိပေမယ့် ပုံမှန်အရတော့ ကျွန်တော် အဲဒီလောက်ကြီး လူကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူသဌေးမှန်းသိလို့ ကြောက်ပြီး အထင်ကြီးလို့လည်းမဟုတ်ဘူး၊ ရှည်တဲ့ဇာတ် လမ်းချုံ့ရရင် သူတို့ စားသောက် နေစဉ်မှာပဲ ကျွန်တော့် bossေ၇ာက်လာပြီး သူ့ကို သွား နှုတ်ဆက်တဲ့ အခါ နောက်နေ့မနက် သူအကုန်အကျခံလို့ သူတို့အုပ်စု Dubai ကိုသွားလည်မှာဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံး7stars( အမှန်က 5starsပဲရှိပါတယ်) ဟိုတယ် BURJ -AL ARAB မှာ တည်းမှာမို့ အခု အကြို လာစားသောက်တာ ဖြစ်ကြောင်း ဟိုတယ်ရဲ့ဓါတ်ပုံ တွေ ပါ ထုတ်ပြပြီး ခပ်ကြွားကြွား ပြောပြ တယ်။
အဲဒီမှာ တင်ပဲ အကြွားသန်တဲ့ ကျွန်တော့ သဌေး က ဒီဆိုင်က၀န်ထမ်းတွေ အကုန်လုံး Dubai မှ ခေါ်ထားတာဖြစ်ကြောင်း ၊ Chef တွေ လည်း5stars ထွက် တွေဖြစ် ကြာင်း တစ်ဆက်ထဲမှာပါ သူပိုင်ဆိုင်သုံးဆိုင်ရဲ့ အင်ချပ် လက်ရှိစားပွဲပေါ်က စားကြွင်းစားကျန် တွေ ကို သိမ်းနေတဲ့ အသားဝါ အေးရှန်း စားပွဲထိုးလေး ဘဆွေ ဟာ သူတို့ သွား မယ့် Burj al Arabဟိုတယ်မှာ အလုပ် လုပ်ကိုင် ခဲ့ပြီး အခြား Dubai က နာမည်ကြီး 5stars တွေ ဖြစ်တဲ့ Jumeirah Beach, Emirate Tower , Dusit Dubai ဟိုတယ် တွေ မှာလည်း လုပ်ခဲ့ သေးကြောင်း ပစ်ကြွား ပါတော့တယ်။ သူဌေးနဲ့ အတူပါလာတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ရဲ့အသံတိမ် သွားတယ် သဌေးကိုကြည့်တယ်၊
အဲဒီအချိန်မှာတော့ သူဌေးကြီး ရဲ့ မျက်နှာပေါ်က တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အရိပ်တွေထဲမှာ စိတ်မကောင်းအားနာခြင်း၊မဖြစ်နှိုင် မထင်မှတ်တာ ကိုကြားသိရလို့ အံ့သြခြင်း၊ မိမိသူတစ်ပါး အပေါ်နိုင်ထက်စီးနင်း မောက်မာမိသည်ကို ရှက်ခြင်း၊တစ်ပါးသူရဲ့ မိမိကိုယ် မိမိ နှိမ်ချကာ မာန်မာန ကို ဘေးချထားနိုင်မှု ကို လေးစားခြင်း စတာတွေအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်း တွေ့ လိုက်ရပါတော့ တယ်….။အပြန်မှာတော့ ကောင်းမွန်စွာ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ပြီး ပေါင် ၂၀၀ တစ်ပ် ပေးသွားပါတယ်။
အများဆုံးရဘူးတဲ့ သဒါကြေးပါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ် ၁ ပေါင် ကို ၂ ဒေါ်လာ ပေါက်တဲ့ အချိန် ပါ။စိန်နဲ့မြ လက်စွပ်တစ်ကွင်း အမှတ်တစ်ရ
မီလျံနာ သေဌေးကြီးကို စားပွဲထိုးလေးရဲ့အောင်ပွဲပါ..။ တစ်ခြားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မယှဉ်နှိုင် မယှဉ်သာတဲ့( ယှဉ်ရန်လည်းစိတ်ကူးမရှိပါ)သူတစ်ယောက်ကို မိမိကိုယ်မိမိ နှိမ်ချခြင်းနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ဘူးပါတယ်၊ ကိုယ်တွေ့ပါ။
နုတ်တရာ စာတလုံး ဆိုတော့ ..စာတလုံးရေးပြလိုက်တာ အတွေးအမျိုးမျိုးထွက်လာတယ် ..အကိုတို့ အမတို့ ပြောတာတွေက အကုန်မှန်ပါတယ် … နိမ့်ချတယ် ဆိုတဲ့သဘောက ဥပမာ အနေနဲ့ ..ဒီရွာထဲမှာပဲကြည့်ပါ ( ရ)တန်းပဲအောင်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဆို ဘယ်သူက အထင်သေးရဲလဲ တကယ်လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ သူလဲ တခါတလေ အမောက်တော့ ထောင်ပြတာပဲ.. နောက်ရှိပါသေးတယ် .ကျွန်တော်က ဘာမှမသိပါဘူးတို့ ၊ စာပေကိုဝါသနာပါပြီး အခုမှ စာရေးမလို့ ကြိုးစားတုန်းပါ တို့၊ လက်စမ်းစာပေတို့ ၊ကျွန်တောသိသလောက်ကလေးရေးပြတာပါတို့ဆိုတာ နိမ့်ချတဲ့သဘောဆောင်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်.. ခေါင်းပေါ်တက်လာရင်တော့ သူတို့လဲ အမောက်တော့ရှိမှာပေါ့ ရေးလိုက်တဲ့စာတွေများ ကောင်းမှကောင်း သဂျီး ဆိုလဲ ကိုယ့်ထက်ငယ်ပေမဲ့ ကိုရင် တပ်ခေါ်ပုံ၊ (မ) တက်ခေါ်တာတို့ဆိုတာ လေးစားသမှု နဲ့ဆိုပေမဲ့ နိမ့်ချတဲ့ သဘောထဲပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်.. နိမ့်ချတာမဟုတ်တဲ့သူတွေကတော့ မန်တက်တာပေါ့… လူကြီး လူကြီးလူကြီးမှန်းမသိ ၊ ငါသိ ၊ငါတက် ဘ၀င် တမျိုးပေါ့..
ပြောရရင်တော့အများကြီးပါ အကိုတို့ အမ တို့လဲ သိကြမှာပါ.
မှတ်ချက်၊ ၊ ကာယကံရှင်များ အမွန်းတင် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည် စိတ်မဆိုးတော် မှုကြကုန်လင့်.
ကျနော်က ပညာသင်လေးမို့ စာအေ၇းအသားလေးတွေကိုပဲလိုက်ဖတ် လေ့လာနေဆဲမို့….
ခုတော့7ပွိုင့်ပဲယူသွားပါရစေ။…
၇ ပွိုင့်ယူပြီး ၃ ပွိုင့်ပြန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….